တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် နံနက် ၆း၀၀-၆း၃၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် နံနက် ၆း၃၀-၇း၀၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် ညနေ ၆း၃၀-၇း၀၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် ည ၉း၀၀-၁၀း၀၀ နံနက် ၆း၀၀-၆း၃၀နံနက် ၆း၃၀-၇း၀၀ညနေ ၆း၃၀-၇း၀၀ညပိုင်း ၉း၀၀-၁၀း၀၀ ယခင်အစီအစဉ်ဟောင်းများပေါ့ဒ်ကတ်စ်မိုဘိုင်းလ် ဗွီအိုအေမြန်မာ - YouTube နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာအပတ်စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာဗွီဒီယိုသတင်း Subscribe toVoice of America Podcast
to get audio automatically delivered to you. You can listen to the files on your computer or load them on your portable media player and take them with you. ရေဒီယို တီဗွီ-ဗွီဒီယို နံနက်ပိုင်း ၆း၀၀-၆း၃၀ - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံတော်ချိန် 2330
- ကြာမြင့်ချိန် (၃၀) မိနစ်
ရယူရန်iTunes နံနက်ပိုင်း ၆း၃၀-၇း၀၀ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံတော်ချိန် 0000
ရယူရန်iTunes ညနေပိုင်း ၆း၃၀-၇း၀၀ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံတော်ချိန် 1130
ရယူရန်iTunes ညပိုင်း ၉း၀၀-၁၀း၀၀ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံတော်ချိန် 1430
ရယူရန်iTunes နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာ ဗွီအိုအေ မြန်မာ နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာ အပါအဝင် ဗွီအိုအေ-အာရှ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တွေကို Asia Sat7ဂြိုဟ်တုကနေ နေ့စဉ် (၂၄) နာရီပတ်လုံး ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ နေ့စဉ် မနက် (၇) နာရီခွဲတိုင်းမှာ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်သစ်ကို တင်ဆက်ပေးပြီးတော့ နောက်နေ့မနက် အစီအစဉ်သစ် မပြောင်းခင်အထိ အကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။
နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာ အစီအစဉ်မှာတော့ နောက်ဆုံးရ မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းများ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ သိပ္ပံ၊ စာပေဂီတ သတင်းဆောင်းပါးများကို တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ဗွီဒီယို ပေါ့ဒ်ကတ်စ်iTunes အပတ်စဉ် တီဗွီမဂ္ဂဇင်း ဗွီအိုအေ မြန်မာ အပတ်စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာ အပါအဝင် ဗွီအိုအေ-အာရှ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တွေကို Asia Sat3ဂြိုဟ်တုကနေ နေ့စဉ် (၂၄) နာရီပတ်လုံး ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ နေ့စဉ် မနက် (၇) နာရီခွဲတိုင်းမှာ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်သစ်ကို တင်ဆက်ပေးပြီးတော့ နောက်နေ့မနက် အစီအစဉ်သစ် မပြောင်းခင်အထိ အကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။
အပတ်စဉ် တီဗွီမဂ္ဂဇင်း အစီအစဉ်ကို တနင်္ဂနွေနေ့ နဲ့ တနင်္လာနေ့များမှာ ရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ အပတ်စဉ် တီဗွီမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်မှာ ထူးခြားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်းလွှာများ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်များနဲ့ နိုင်ငံတကာ အနုပညာလောကက သတင်းများကို တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ သက်တန့်ရောင် သတင်းလွှာအစီအစဉ်များကို ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗွီဒီယို ပေါ့ဒ်ကတ်စ်iTunes Servicesပေါ့ဒ်ကတ်စ်RSSအီးမေးလ် သတင်းလွှာမိုဘိုင်းလ် နေ့စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ (၁၀-၂၃-၂၀၁၄)